XORIYO NIN GAYAA HA GUURSADDO!!!!! Q/1aad Qalinkii Mahad Cali-Salaan | Baligubadlemedia.com
XORIYO NIN GAYAA HA GUURSADDO!!!!! Q/1aad Qalinkii Mahad Cali-Salaan
Inaan doorto keligii - Darajiyo u xidho duub-
Madaxweyne iidiran - Uga dhigo dalkoo idil
Shacabkey dantiisiyo tahay dawadiise - Ugu deeq codkaagoo Muse ayaan la dacal marin
Iyo kii dafacee ugu dhacay dab iyo hollac - Tariikhda dahabka midba baalku daabacan-
-”Guul laguma helo weerar aan laga gedoonane Gobanimo ninkii doonayoow geeribaa imane”.
-”Hadba geed is maris baa u hadha,guul dad leeyahaye,miyaan geedddi-baabow arladu,galinna waayeynin.
Baligubadlemedia masuul kama aha aragtida dadweynaha